ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ - “တောက်ပသောအနာဂတ်ဆီသို့ ဦးတည်သည့်လမ်းကြောင်း” - Xinhua News Agency
“ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက် (BRI) သည် လူသားအားလုံးအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးတည်းတစ်ဖွဲ့တည်းပိုင်ဆိုင်သည့် သီးသန့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်ချေ”
လွန်ခဲ့သည့် ၈ နှစ်တာကာလအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် အဆိုပြုခဲ့သည့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက်သည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စင်္ကြံတစ်ခုအဖြစ်သို့ ကြီးထွားလာပြီဖြစ်သည်။
ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက်စီမံကိန်းများအား ပူးတွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ယုံကြည်ချက်များ၊ ခွန်အားများကို ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်စေရန် အရေးကြီးသည့် အထောက်အပံ့များ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ (Xinhua)
“The Belt and Road Initiative (BRI) isapublic road open to all, notaprivate path owned by one single party.”
Over 8 years, the BRI, proposed by Chinese President Xi Jinping, has grown into the world’s largest international cooperation platform.
The joint construction of the BRI projects conveyed confidence and strength to the international community and made important contributions to global anti-epidemic cooperation and economic recovery. #GLOBALink #BeltandRoad